Coral Reef: September 2018
Posted by ဇွန်မိုးစက် | Posted on Sunday, September 09, 2018
Category: Feelings , Miscellaneous
ဂျူဂျူးသည် သွက်လက်ချက်ချာသော သုံးနှစ်ခွဲအရွယ် သမီးကလေး ဖြစ်သည်။ ညအိပ်ရာဝင်ခါနီးတိုင်း တီတီဇွန်က ဂျူဂျူးလေးနှင့်အတူတူ ဘုရားရှိခိုးရင်း ဘုရားစာသင်ပေးခဲ့သည်မှာ ၃လလောက်ရှိပြီ။ ဉာဏ်ကောင်းသော ကလေးမို့ နမောတဿ၊ သြကာသ၊ သရဏဂုံသုံးပါး၊ မေတ္တာပို့၊ ဘုရားဂုဏ်တော်(၉)ပါး၊ တရားဂုဏ်တော်(၆)ပါး၊ သံဃာ့ဂုဏ်တော်(၉)ပါး တို့ကို ၂လအတွင်း အလွတ်ရအောင် ဆိုနိုင်ပြီ။ ညစဉ်ဟုဆိုပေမယ့် တီတီဇွန် ခရီးသွားသော တစ်ပတ်ဆယ်ရက်မှာ သူကလေးလည်း ဘုရားရှိခိုးဖို့ပျက်ကွက်တတ်သည်။ အခြေခံဘုရားရှိခိုးတွင် ရွတ်ဆိုရလွယ်ကူသော်လည်း အရေးကြီးသည့် ငါးပါးသီလကို သိပ်မကြာသေးခင်ကမှ သင်ပေးဖြစ်သည်။ တီတီဇွန့်ခံယူချက်က ငါးပါးသီလ၏ အဓိပ္ပာယ်ကို ဂျူဂျူးလေး သေသေချာချာ သိစေချင်လို၍ နောက်ဆုံးမှ သင်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ပထမဆုံး ပါဠိလိုနှုတ်တိုက်ကို နားယဉ်သွားအောင် အရင်ချပေးသည်။ ငါးပါးလုံး ချောချောမောမော ရွတ်ဆိုနိုင်သည့်အခါ တစ်ပါးခြင်း၏အဓိပ္ပာယ်ကို မြန်မာလိုပြန်ရှင်းပြသည်။ မြန်မာလိုသင်ပေးကာမှ သုံးနှစ်ခွဲသမီးလေး၏မေးခွန်းများကို သူ့အရွယ်နှင့်နားလည်နိုင်လောက်သော စကားလုံးများဖြင့် တီတီဇွန်ပြန်ဖြေနိုင်ဖို့ ကြိုးစားရတော့သည်။ ခေတ်စကားနှင့်ပြောရရင် အဲသည်မှာ... စတာပဲပေါ့။ :D
ဂျူဂျူးရေ... ငါးပါးသီလ ဆိုရအောင်
ပါဏာတိပါတာ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ
တစ်ကြောင်း မဆုံးခင်မှာပင် ဂျူဂျူးက.... တီတီ သူ့အသက်လည်း မသတ်ဘဲဆိုတာ ဘာကိုပြောတာလဲ?
သြော်... တိရစ္ဆာန်လေးတွေ သမီးကြောင့် နာနာဖြစ်အောင် မလုပ်ရဘူးလို့ပြောတာ၊ သမီးကိုလာကိုက်တဲ့ ပုရွက်ဆိတ်လေးတွေ၊ ခြင်တွေကိုလည်း လက်နဲ့ဖိမသတ်ရဘူးနော်၊ လေနဲ့အသာလေး မှုတ်ထုတ်လိုက်၊ နောက်ပြီး ငါးလေးတွေကိုလည်း မမျှားရဘူးနော်။
ငါးလေးကို မျှားလိုက်ရင် ငါးမျှားချိတ်က ငါးလေးရဲ့လည်ပင်းကိုချိတ်သွားတော့ နာနာဖြစ်သွားတာပေါ့၊ နောက်ပြီး ငါးလေးတွေက ရေထဲမှာပဲ အသက်ရှင်နိုင်တာလေ၊ သူတို့ကုန်းပေါ်ရောက်လာရင် အသက်ရှူလို့မရတော့ သေသွားတာပေါ့။
အို.... ဂျူဂျူးဆီမှ အာမေဋိတ်သံလေးထွက်လာသည်။
ကဲ... လိုက်ဆိုနော် သူ့အသက်လည်း... မသတ်ဘဲ ... အမြဲရှောင်ကြဉ်မည်
တီတီ... အမြဲရှောင်ကြဉ်မည်ဆိုတာက ဘာလဲဟင်?
အမြဲရှောင်ကြဉ်မည် ဆိုတာက သမီးက တိရစ္ဆာန်လေးတွေကို နာနာဖြစ်အောင်၊ သေသွားအောင် မလုပ်ပါဘူးလို့ ကတိပေးတာ promise လုပ်တာပေါ့။
အဒိန္နာဒါနာ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ
သူ့ဥစ္စာလည်း ... မခိုးဘဲ ...
တီတီ... သူ့ဥစ္စာလည်း မခိုးဘဲဆိုတာ ဘာကိုပြောတာလဲ?
သူ့ဥစ္စာဆိုတာ သူများပစ္စည်းတွေ၊ ကစားစရာတွေကို ပြောတာပေါ့။ သမီးက မမ စကိုင်လာတို့အိမ် သွားကစားတဲ့အခါ သမီးကစားချင်တဲ့အရုပ်ကလေး တွေ့ရင် ခွင့်တောင်းပြီးမှ ဆော့ရသလိုမျိုးလေ။ ဟိုတစ်နေ့က ကျောင်းမှာ သမီးရဲ့ jacket ကို ခွင့်မတောင်းဘဲ ယူသွားတဲ့ လီယာလေးလို မလုပ်ရဘူးလို့ ပြောတာ။
လီယာလေးက သမီးကို sorry လို့ လာပြန်ပြောတယ် တီတီ
အင်းပေါ့ ပြောရမှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် သမီးအင်္ကျီကို ခွင့်မတောင်းဘဲ ယူပြီးမှ sorry မှ ပြောတာထက်စာရင် သူက သမီးကို အရင်ခွင့်တောင်းပြီးမှ ယူတာ ပိုကောင်းတယ်မဟုတ်လား? အဲဒါကြောင့် သမီးလည်း သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ပစ္စည်းတွေ၊ ကစားစရာတွေကို ယူကြည့်ချင်ရင် အရင်ခွင့်တောင်းရမယ်နော်။ ခွင့်မတောင်းဘဲ မယူရ၊ မကစားရဘူး။ အဲလိုလုပ်တာ မကောင်းဘူး၊ မယဉ်ကျေးဘူး၊ rude ဖြစ်တယ်နော်။ ဂျူဂျူးလေးက နားလည်သွားပြီမို့ထင်သည် ခေါင်းညိတ်ပြသည်။
သူနားလည်သွားမှ တစ်ကြောင်းလုံးကို ပြန်ဆက်ဆိုရသည်၊ သူ့ဥစ္စာလည်း... မခိုးဘဲ... အမြဲရှောင်ပါမည်။ ဒီတစ်ခါတော့ ကလေးလိုက်ဆိုရလွယ်အောင် တီတီဇွန်က ရှောင်ကြဉ်အစား ရှောင်ပါမည်လို့ ပြောင်းလိုက်သည်။
ကာမေသု မိစ္ဆာစာရာ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ
သူ့အိမ်ယာလည်း... မမှားဘဲ... အမြဲရှောင်ပါမည်
တီတီ သူ့အိမ်ယာလည်း မမှားဘဲ ဆိုတာ ဘာကိုပြောတာလဲ (အင်း... ဒီမေးခွန်းက ၃နှစ်ခွဲအရွယ် ကလေးတစ်ယောက်ကိုဖြေဖို့ တီတီဇွန့်အတွက် tricky question ဖြစ်နေသည်၊ သို့သော် တီတီဇွန်တစ်ယောက် ကြိုးစားအားထုတ်၍ ဖြေဆိုရပါသည်)
သူ့အိမ်ယာလည်း မမှားဘဲဆိုတာ သမီးက ကိုယ့်အိမ်မဟုတ်တဲ့ သူများအိမ်ကို သမီးအိမ်လို့မှားထင်ပြီး ညအိပ်မသွားရဘူးလို့ဆိုလိုတာ။ သမီးကျောင်းကပြန်လာရင်၊ အပြင်မှာလည်လည်သွားပြီးပြန်လာလို့ မိုးချုပ်သွားရင် သမီးအိမ်မှာပဲ ဖေဖေတို့ မေမေတို့နဲ့ အတူတူအိပ်တာလေ၊ သူများအိမ်မှာ သွားမအိပ်ဘူး မဟုတ်လား။ သူများအိမ်ကို ကိုယ့်အိမ်အမှတ်နဲ့မှားပြီး သွားမအိပ်ပါဘူးလို့ ဆိုလိုတာ။ ဂျူဂျူးက နားလည်ချင်မှ နားလည်မည်ဖြစ်သော်လည်း ဆက်မမေးတော့ဘဲ လိုက်ဆိုသည်မို့ တီတီဇွန် ခေါင်းစားမည့်အရေးမှ သက်သာသွားသည်။
မုသာဝါဒါ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ
လိမ်ညာမုသား.... မပြောဘဲ... အမြဲရှောင်ပါမည်
တီတီ... လိမ်ညာမုသား ဆိုတာ ဘာကိုပြောတာလဲ?
လိမ်ညာမုသား ဆိုတာ telling lies ကို ပြောတာပေါ့၊ သမီးမှတ်မိတယ် မဟုတ်လား၊ Johny Johny Yes Pa Pa ထဲမှာလေ... ဂျော်နီလေးက သကြားတွေခိုးစားနေတာ၊ သူ့ဖေဖေက eating sugar သကြားတွေစားနေလားဆိုပြီး မေးတာကို ဂျော်နီလေးက အမှန်တိုင်းမဖြေဘဲ No Pa Pa ဆိုပြီး ပြောလိုက်တာလေ။ အဲဒါနဲ့ သူ့ဖေဖေက telling lies... လိမ်ပြောနေတယ်... open your mouth... ပါးစပ်ဟပြစမ်းပါဦးလို့ ပြောလိုက်တော့ ဂျော်နီလေးက ပါးစပ်ဟလိုက်တာ သကြားတွေထွက်ကျလာတယ်လေ။ ဂျော်နီလေးက သကြားတွေစားနေတာကို မစားဘူးလို့ပြောတာ telling lies လိမ်ညာပြောတာပေါ့၊ ဂျူဂျူးလည်း တစ်ခုခုစားချင်ရင် ဂျော်နီလေးလို လိမ်မပြောရဘူးနော်၊ ဖေဖေတို့ မေမေတို့ကို ခွင့်တောင်းပြီးမှ စားရမယ်။ တကယ်လို့ တီတီတို့မသိအောင် သမီးက lollipop တွေယူစားနေတုန်း ဖေဖေတို့မေမေတို့မေးရင် ဟုတ်ကဲ့ သမီး စားနေပါတယ်လို့ အမှန်အတိုင်းပဲပြောရမယ်နော်။ ဂျူဂျူးလေးက နားလည်သွားဟန်နှင့် ခေါင်းညိမ့်သည်။ (နောက်ရက်တွေမှာ လေးပါးမြောက် မုသာဝါဒါဆိုတိုင်း တီတီဇွန့်ခမျာ Johny Johny Yes Pa Pa တစ်ပုဒ်လုံးကိုပါ အမြဲဆိုပြရတော့သည်)
သုရာမေရယ မဇ္ဇပ္ပမာဒဋ္ဌာနာ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ
တီတီ အရက်သေစာ ဆိုတာ ဘာကိုပြောတာလဲ?
အရက်သေစာဆိုတာ alcohol ပါတဲ့ အရည်တွေကို ပြောတာပေါ့၊ အဲဒီအရည်တွေသောက်ရင် သမီးခန္ဓာကိုယ်ထဲက organs တွေ နာနာဖြစ်ပြီး နေမကောင်းဖြစ်သွားမှာ။
ဂျူဂျူးလေးက မဆိုင်းမတွပင် ... ဟိုတစ်ခါ ဂျူဂျူးလက်ကို ဓားရှတုန်းက alcohol wipe နဲ့ သုတ်တာ အနာပျောက်သွားတယ်။
တီတီဇွန်က ဂျူဂျူးမသိအောင် သက်ပြင်းလေးချပြီး... အဲဒီ alcohol wipe နဲ့ သုတ်တုန်းက စပ်စပ်ကြီးဖြစ်လို့ သမီးအော်ငိုသေးတယ်လေ၊ အဲဒါ alcohol ပါတဲ့ wipe သေးသေးလေးနဲ့ထိတာတောင် သမီး တအားစပ်သွားတာ၊ အဲဒါတွေအများကြီးပါတဲ့ အရည်တွေသောက်မိရင် သမီးတစ်ကိုယ်လုံးပူပူစပ်စပ်ကြီး ဖြစ်သွားမှာပေါ့။ အဲလိုပူပူစပ်စပ်ကြီးတွေ သောက်လိုက်ရင် သမီး body ထဲက organ တွေ နာနာဖြစ်ပြီး ပျက်စီးကုန်မှာ၊ အဲဒါဖြစ်သွားရင် သမီးနေမကောင်းဖြစ်ပြီး ဆေးရုံတက်ရမှာ။ ဆေးရုံသွားရင် ဆေးထိုးခံရမည်ဆိုသော အသိလေးရှိနေသော ဂျူဂျူး မျက်လုံးလေးတွေပြူးသွားပြီး၊ အဲဒါဆို fruit ပါတဲ့ juice တွေပဲ သောက်တော့မယ်။
ဒါပေါ့.. သမီးက ရေတွေလည်း သောက်လို့ရတယ်၊ milk တွေလည်း သောက်လို့ရတယ်၊ fruit juice တွေလည်း အများကြီး သောက်လို့ရတယ်။ alcohol ပါတဲ့ အရက်တို့ဘီယာတို့ဝိုင်တို့ကို သောက်လို့မရဘူးနော်။ ဂျူဂျူးက ခေါင်းလေးကို တွင်တွင်ညိတ်ရင်း ဆက်ဆိုရှာသည်။
အရက်သေစာ မသောက်ဘဲ အမြဲရှောင်ပါမည်။
ညစဉ်ငါးပါးသီလဆိုတိုင်း မေးနေကျမေးခွန်းတွေကိုပဲ ဂျူဂျူးလေးက ထပ်ပြန်တလဲလဲမေးသည်၊ တီတီဇွန်ကလည်း စိတ်ရှည်လက်ရှည် ရှင်းပြပေးရသည်။
ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်က အခြားမြန်မာမိသားစုနှင့်ညနေစာသွားတော့ ဖခင်ဖြစ်သူနှစ်ဦးက ဘီယာသောက်မလားဟု တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးမေးသည်ကို ဂျူဂျူးကြားသည်နှင့် ဘေးနားမှာကပ်ထိုင်နေသော သူ့အမေကို လှမ်းပြောသည်။ မေမေ... ဘီယာက alcohol ပါလို့ မသောက်ရဘူးတဲ့။ ဂျူဂျူးက fruit juice တွေပဲသောက်မှာ။ သမီးလေးအပြောကြောင့် ဂျူဂျူးမေမေက သဘောကျစွာရယ်သည်။
တကယ်တော့ ငါးပါးသီလဆိုတာ လူ့လောကမှာ အရေးကြီးဆုံး စာရိတ္တသီလဖြစ်ကြောင်း၊ အကြောင်းတရား (၄)ပါးဆုံမှ ကံမြောက်ကြောင်း၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ရဲ့ ငါးပါးသီလထဲက must not kill, must not steal.... အစရှိသည်တို့နှင့် ပညတ်တော်ဆယ်ပါးထဲက shall not kill, shall not steal... တို့၏ အဓိပ္ပာယ်ကွာခြားကြောင်း စတာတွေကိုတော့ ဂျူဂျူးလေးနားလည်နိုင်လောက်တဲ့အရွယ်မှ ပြောပြရဦးမည်။ အမေရိကားမှာမွေးပြီး၊ အမေရိကားမှာပင် ဆက်လက်ကြီးပြင်းဦးမည့် ဂျူဂျူးလေး ငါးပါးသီလနှင့်ပတ်သက်ပြီး သူ့အသက်ရွယ်လေးနှင့် ဒီလောက်အသိတရားရှိသွားတာလေးကိုတွေးပြီး ၀မ်းသာနေမိသူက တီတီဇွန်ရယ်ပါ။ 🙂